Sida looga baxo Havana loona tago Varadero gaadiid dadweyne ama mid gaar loo leeyahay | Safarka Absolut
Sidee looga socdaa Havana ilaa Varadero? Obama wuxuu furey marxalad cusub oo xiriir ah oo udhaxeysa Mareykanka iyo Cuba, laakiin waa la arki doonaa waxa dhici doona hada Donald Trump oo madaxweyne ah. Way adag tahay in la odoroso, laakiin nasiib wanaag kuweenna aan ahayn Mareykanku waxay sii wadi karaan safarka jasiiradda dhib la'aan.
Waan tixgelinayaa taas Cuba waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee laga tago Kariibiyaanka maxaa yeelay maahan oo keliya inay leedahay dabeecad qurux badan laakiin sidoo kale waxay leedahay taariikh iyo dhaqan aad u hodan ah. Waxa jira laba magaalo oo inta badan xoogga saara dalxiiska badan: Havana iyo Varadero. Miyay midba midka kale ka fog yahay? Sidee looga socdaa Havana ilaa Varadero ama taa beddelkeeda? Qor macluumaadkan wax ku oolka ah:
1 Havana iyo Varadero, isla wadadaas
2 Gaadiidka u dhexeeya Varadero iyo Havana
2.1 Sida looga baxo Havana ilaa Varadero bas ahaan
2.2 Taksi ahaan
2.3 Kirada baabuurta
Havana iyo Varadero, isla wadadaas
Havana waa caasimada qaranka laakiin Ilaa ay soo ifbaxayaan furayaasha khariidada dalxiiska, Varadero wuxuu ahaan jiray spa-ga ugu caansan.
Varadero wuxuu kujiraa degmada Cárdenas, oo katirsan gobolka Matanzas iyo kaliya 130 kiiloomitir Havana. Magaaladu waxay dhalatay qarnigii XNUMXaad markii dadka hodanka ah ee Cárdenas ay indhahooda ku arkeen xeebta cad iyo badda ukunka ah.
Laakiin waxaan ka hadlaynaa aag kuleyl ah sidaa darteed goobta waxaa ku dhaca kaneeco iyo injir, iyo sidoo kale duufaanno mararka qaarkood mararka qaarkood. Laakiin nasiib wanaag waxaa jiray dad ku adkaysanaya sidaa darteed dhammaadkii qarnigii waxaa magaalada ku dhashay xarun magaalo oo leh afargees, guryo, baarkinka, kaniisadda iyo suuqa.
Hoteelkii ugu horreeyay waxaa la dhisay 20-meeyadii ee qarniga cusub iyo wixii markaa ka dambeeyay waxaa soo baxay doolar iyo safarro ka yimid dalka deriska ah, dadka hodanka ah, tirada ugu badan. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan wuxuu ahaa bilyaneerka ku shaqeeya warshadaha kiimikada, DuPont, oo ah ninka dhisay guri ay maanta tahay astaanta Varadero, Xanadú Mansion.
Maanta xeebaheeda waxay haysaa quruxdooda oo dhan waxayna sidoo kale ku dareysaa soo jiidashada taas Waxay noqotay magaalo dalxiis oo leh hudheelo fara badan oo bixiya baashaal. Waxay luntay dabeecadeedii duurjoogta weligeed waana taas sababta haddii waxa aad raadineyso ay yihiin wax aan la sii shaacin waa inaad aadaa furayaasha mana ahan dhammaan, laakiin su'aasha maanta waxay tahay, Sidee looga socdaa Havana ilaa Varadero ama dhinaca kale?
Gaadiidka u dhexeeya Varadero iyo Havana
Masaafada ma badna, 130 kiiloomitir, iyo safarka baabuurku wuxuu qaadanayaa in aan ka badnayn laba saacadood iyo badh, dusha sare. Waxaad kiraysan kartaa taksi ama waxaad raaci kartaa bas ama baabuur aad kireysato. Ama dalxiis.
Sida looga baxo Havana ilaa Varadero bas ahaan
Shirkadda basaska qaranka waa Víazul iyo Havana waxay leedahay adeegyo aad u soo noqnoqda, laga bilaabo 6 subaxnimo. Dariiqa kale ee adeeggu wuxuu bilaabmayaa duhurkii. Baska ugu horeeya wuxuu baxayaa 12 wuxuuna imaadaa caasimada markay tahay 3:15 pm.
Sida laga soo xigtay bogga rasmiga ah ee Viazul kuwani waa jadwalka iyo qiimaha, markaa waxaad leedahay tusaale:
Varadero: wuxuu baxayaa 12, wuxuu yimaadaa 3:15 pm. Qiimaha ayaa ka hooseeya 10 euro.
Varadero: wuxuu baxayaa 4ta galabnimo wuxuuna imaanayaa 7:15 pm. 10 euro.
Varadero: wuxuu tagayaa 7:35 pm, wuxuu imaanayaa 10:50 pm. 10 euro.
Adeegani waa toos. Waxaa jira mid kale oo leh jadwal hore, 8 subaxnimo, laakiin sameeya Jidka Viñales markaa waxay timaaddaa Havana 11:20 am. Qiimaha tigidhka waa isku mid. Waad qaadan kartaa xitaa adeeg kale oo sameeya Wadada Trinidad, kuna dhammaanaya Havana oo sii maraya Varadero 2-da duhurnimo. Waxay timaadaa caasimada 5:15 am.
Varadero gudaheeda, xafiisyada Víazul waxay ku yaalliin geeska Calle 36 iyo Autopista, boosteejada basaska. Haddii aad sii joogto aagga dhexe ee Varadero waxaad u jirtaa dhawr tallaabo, laakiin geesaha kale ee dalxiiska tagaasida waxay ku kacaysaa inta udhaxeysa 3 CUC (2 euro) iyo 70 CUC (5 euro).
Sidaan horay u sheegay wadada gadaal, laga bilaabo Havana ilaa Varadero, waxay leedahay jadwallo badan, laga bilaabo 6 subaxnimo ilaa 5:30 galabnimo oo isku qiimo ah. Haddii aad shaki ka qabtid waxaad marwalba booqan kartaa bogga rasmiga ah ee Vía Azul, oo aad u dhameystiran qiimaha, jidadka, xafiisyada xafiisyada iyo meelaha loo socdo.
Ikhtiyaar kale oo lagu ogaado sida looga baxo Havana loona tago Varadero waa in si toos ah loo kireeyo taksi oo weydiiso a safar gaar ah. Waxaa laga yaabaa inaad u safarto si raaxo leh iyo mid gaar ah oo sicirka waa la sii diyaarin karaa ka hor. Waxaad ku bixin kartaa boos taksi la wadaago inta u dhexeysa 20 iyo 25 CUC (inta u dhexeysa 18 iyo 22 euro). Waa inaad taqaanaa sida loo gorgortamo. Haddii aad ku jirto guri gaar loo leeyahay oo kirada dalxiiska ah, milkiilayaashu way kaa caawin karaan arrintaas.
Waxay noqon doontaa lagama maarmaan maxaa yeelay Tagaasida Cuba waa la xakameeyaa Iyo haa, tusaale ahaan, waxaad ka aadeysaa Havana kuna socotaa Varadero taksi gaar loo leeyahay, waxaa lagaa joojin karaa koontaroolka maxaa yeelay Varadero waxay kaliya u oggol yihiin taksiyada rasmiga ah ama gawaarida gaarka loo leeyahay inay wareegaan. Talo bixin: ka ogow hudheelka ama guriga aad degayso.
Dabcan, Qiimaha tagaasida ma ahan mid raqiis ah. Waa inaad xisaabisaa in taksiga rasmiga ahi uu ku dhow yahay 90 CUC, in yar oo ka yar 90 euro, oo ka soo horjeedda qiyaastii 50 ama 60 taksi gaar loo leeyahay xitaa sidaas, oo waa inaad ogaataa, kharash badan ayaa ku baxa haddii safarku habeen yahay.
Sidee looga socdaa Havana ilaa Varadero iyada oo aan ku xirnayn gaadiidka dadweynaha ama dhinacyada saddexaad? Kireynta gaari ma tahay ikhtiyaar wax ku ool ah? Haddii aad jeceshahay inaad baabuur wado oo aad rabto inaad ku socoto jidkaaga, haa. Laakiin kirada gaariga dhexe waa qiyaastii 40 ama 0 euro maalintii oo lagu daray shidaal iyo caymis, in kabadan toban doolar oo dheeri ah.
Waxaa jira hay'ado badan oo kirada baabuurta ah, laakiin hudheelka ayaa adiga kaa daryeeli kara taas. Maanta kireynta a baabuur nooca moodeelka ah (Skoda Fabia Hatchback 1.4, tusaale ahaan), waa qiimo laga bilaabo 37 euro maalintii. Hyundai Atos ama Peugeot 206, waa isku mid.
Waxaan ka tagaynaa ilaa ugu dambayntii ikhtiyaarka ugu habboon dalxiis ee ugu raaxada badan ee raadinaya sida looga tago Havana ilaa Varadero iyada oo ugu yar ee dhibaatooyinka suurtagalka ah dalxiis abaabulan. Waxay iskudubarid u tahay wakaaladda dalxiiska, gurigaaga ama Cuba lafteeda, waxaadna dooran kartaa inaad socotid dhowr saacadood ama dhowr maalmood. Waxaa ka mid ah safarka baska ee looga baxo ama looga soo baxo Havana iyo booqasho ku timaadda magaaladii hore ee caasimadda.
Qiimayaashu waxay ka bilaabmayaan 120 CUC qofkiiba a safarka maalinta ama qofkiiba 200 CUC haddii aad ku hoydo Varadero. Miyaad dagi doontaa goobta loo tamashlaha tago ee Varadero waxaad rabto inaad sameysona waa inaad ku socotaa dhinaca kale? Hagaag, waa isku mid, ama waxaad iska diiwaangelisay dalxiis ama waxaad kubiirtaa labada safar bas ama taksi, waxay kuxirantahay miisaaniyadaada.
Sida aad arki karto waxaa jira xulashooyin qaarkood ka tag Varadero ilaa Havana ama taa beddelkeeda. Waa inaad ka fikirto midkee ku habboon nooca safarkaaga. Waxaan rajeyneynaa in macluumaadkaan aan ku siiney, aad horeyba u laheyd fikrad cad oo ku saabsan sida looga tago Havana loona tago Varadero ama taa bedelkeeda. Haddii aad sidoo kale ogtahay wax kale oo beddelaad ah oo aan ku soo sheegnay qormadan, nooga sheeg arrintaas faallo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Sida looga tago Havana loona tago Varadero
Sida loo ballansado safar looga safro havana ilaa varadero ilaa loo dhan yahay Barcelo solymar arenas blanca safar wareeg ah iyo qiime qofkiiba
Ku jawaab Luis aviles
Waad salaaman tahay Luis
Waxaan sidoo kale sameyn doonaa isla wareejintii waxaan rajeynayaa inaad kuu sheegi karto sida loogu dhaqaaqo qiimaha ugu macquulsan ...
Salaan !! Waxaan aadayaa bisha Janaayo, waxaan nahay qoys ka kooban 3 qof, 2 qaangaar ah iyo gabar kursi curyaan ah, yaa igula talin kara aniga oo ka wareegaya Varadero una wareegaya Havana, qiime jabanna leh. Waxaad ii soo diri kartaa qiyaasta qiimaha, safarka wareega.
Ku jawaab Lucia Alvez
Waxaan rabaa inaan maalin booqasho ku tago Havana Varadero oo aan soo laabto, hudheel loo wada dhan yahay maalintaas, laba qof
Jawaab Miguel Cespedes A
Miguel, safarka hal maalin ee Varadero iyo socdaalkiisa, kuwa ugu fiican ayaa ah dalxiisyada ay iibiyaan wakaaladaha safarka ee Cuba, qiimaha waa 20 CUC (doolar) qofkiiba, oo ay ku jiraan gaadiidka wareega ee Havana iyo qadada caadiga ah ee Plaza America.
Miyaad ii sheegi kartaa wakaaladda ay kugu soo dallacayaan 20 cuc, waxaan rabaa inaan tago hal maalin oo safar guud ah oo aan ku tago Varadero oo aan ogaado xeebta iwm
Waldy cardtey dijo
Waa salaaman tahay.Waxaan joogi doonaa Cuba Sabtida 10-ka Ogosto waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo tago Varadero.Sidee loo qoraa waxaan nahay 4 qof oo waaweyn iyo laba gabdhood, mahadsanid ..
Ku jawaab Waldy cardentey
Waa salaaman tahay, waxaan joogi doonaa Havana bisha Maajo, 3 qof oo qaangaar ah iyo cunug 12 jir ah, waxaan jeclaan lahayn inaan Varadero ku aadno dalxiis, ma ii sheegi kartaa cidda aan shaqaalaysiiyo?
WAA MAXAY TABABARKA UGU FUDUD EE UGU AMMAAN EE LAGA TAGO HAVANA loona tago VARADERO
HAVANA HALKEE AIRPORT AAD RUN KA AHAY?
Jawaab JAVIER SANCHEZ
Cuevas del Soplao, oo ah layaab dabiici ah oo ku sugan Cantabria